Quique Setien Oo Jawaab Degdeg Ah Siiyey Lionel Messi Oo Dalbaday In Isbeddel La Sameeyo: "Xataa Ma Hubo Inaan Kulanka Champions League Sii Joogayo Anigu" - Gool24.Net
Quique Setien Oo Jawaab Degdeg Ah Siiyey Lionel Messi Oo Dalbaday In Isbeddel La Sameeyo: “Xataa Ma Hubo Inaan Kulanka Champions League Sii Joogayo Anigu”
Tababare Quique Setien ayaa jawaab degdeg ah ka bixiyey hadal kasoo yeedhay kabtanka Barcelona ee Lionel Messi oo ku baaqay in isbeddel weyn lagu sameeyo kooxda, waxaanu tababaraha reer Spain sheegay in xataa aanu ogeyn haddii uu sii joogo doono kooxda kulanka Champions League ee ay August 8 kulan ballansan yihiin Napoli.
Barcelona ayaa guul-darro xun oo 2-1 ah ay kasoo gaadhay ciyaartii ay garoonkooda Camp Nou ku martigeliyeen Osasuna, xilli Real Madrid ay u dabbaal-degaysay hanashada horyaalka LaLiga, waxaana dhamaadkii ciyaarta si aan looga baran warbaahinta u hortegay Lionel Messi oo si cad u sheegay in kooxda looga baahan yahay isbeddel weyn haddii la doonayo in kulanka Napoli ee lugta labaad ee wareegga 16ka ay guul ka keenaan.
Hadalkan waxa jawaab degdeg ah ka bixiyey Quique Setien oo la weydiiyey haddii ciyaarta uu Lionel Messi ka hadlayo ee Champions League uu isagu hoggaamin doono Barcelona, waxaanu yidhi: “Waxaan rajaynayaa inaan kulanka Napoli sii ahaado tababaraha, laakiin ma garanayo. Waan ku raacsanahay Messi waxyaabaha qaarkood, waana inaanu is canaananno.”
Laakiin Setien waxa uu Lionel Messi u sheegay in ciyaartii Osasuna ay kaliya kubaddu u dhalan weyday, iyagana goolal fudud laga dhaliyey, taasina keentay guul-darrada, balse waxa uu dhinaca kale qiray in Napoli ay garaaci doonto haddii ay mar kale sidan oo kale u ciyaaraan, waxaanu yidhi: “Haddii aynu sidan usii ciyaarno…. maanta waxaynu qaadanay toban koorne. Haddii ay mid geli lahayd goolka, wali maanaan guuul-darraysaneen. Haddii aanu goolka ku horreyn lahayn, wali maanaan guul-darraysaneen. Waa inaanu is-canaanano.
“Haddii aanu noqono kuwo iyagu wax badan iska dalbaya, waxa jiraya waxyaabo ay tahay in la horumariyo, laakiin sidoo kale, waxyaabo wanaagsan ayaanu qabanay. Maaha in wax walba meesha laga saaro.”
Quique Setien waxa uu qiray ku jiraan waqti murugo, waxaanu yidhi: “Niyad-jabka xilligani waa inaanu ku guul-darraysanay horyaalka oo laga helo dhiirigelin badan, laakiin waxaanu haysanaa maalmo yar oo aanu fasax nahay, waxaanan hubaa in kooxdu ay soo laaban doonto iyadoo firfircoon.”
Tababare Quique Setien waxa uu dhabarka saartay masuuliyadda guul-darrada iyo wixii ka qaldamay kooxda, waxaanu yidhi: “Aniga ayaa masuuliyadda ugu badan leh.”